Al-Faatixa - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Al Faatixa)
Quraanka kariimka ah.
Al-Faatixa Suuratul Al-Faatixa (ingiriis: Al-Fatiha; carabi: ﺳﻮﺭﺓﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ; loogu dhawaaqo Sūrat al-Fātiḥah) waa suurada kowaad ee Quraanka kariimka ah ee diinta Islaamka kaasi oo Alle (s.w.t) ku soo dejiyay Nebi Muxamed (n.n.k.h).
Suuradani Al-Faatixa oo macnaheedu yahay fur-furid, fur-furasho iyo bilaabid ayaa waxay ka kooban tahay todoba aayadood kuwaasi oo sharaxaya "mahadnaqa Alle", "naxariista Alle", cibaadada iyo ka cabsashada Ilaahay. Suurada al-Faatixa qof kasta oo muslim ah oo salaada tukada waxaa ku waajib ah inuu akhriyo suuradan 5ta jeer ee gudashada salaadaha faralka ah. Sida uu wariyey asxaabiga Cabdillahi ibnu Cabbaas iyo kuwo kaleba suurada Al-Faatixa waa mid Makki ah, taasi macnaheedu waa waxay Nebi Muxamed (n.n.k,h) ku soo degtay asagoo jooga magaalada Makkah.
↑ "Al-Faatixa Suuratul Al-Faatixa (ingiriis: Al-Fatiha; carabi: ﺳﻮﺭﺓﺍﻟﻔﺎﺗﺤﺔ; loogu dhawaaqo Sūrat al-Fātiḥah)"
↑ "Sida uu wariyey asxaabiga Cabdillahi ibnu Cabbaas iyo kuwo kaleba suurada Al-Faatixa waa mid Makki ah, taasi macnaheedu waa waxay Nebi Muxamed (n.n.k,h) ku soo degtay asagoo jooga magaalada Makkah"
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Surahs.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Al-Faatixa&oldid=172217"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Nofeembar 2017, marka ee eheed 18:31.